Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Warbaahinta 'Ethernet Media | Shiinaha Ethernet Media Converter Warshad
1000Mbps SFP Beddelaha Warbaahinta ZJ-GS03-PF
1000Mbps Ethernet RJ45 oo loo beddelayo SFP Media Converter wuxuu u beddelaa fiber 100BASE-FX warbaahinta 100Base-TX copper copper ama taa beddelkeeda. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Astaamaha • 1000Mbps Ethernet RJ45 oo loo beddelayo SFP Media Converter • Kalabar o ...
100Mbps SFP Beddelaha Warbaahinta ZJ-1100SFP
100Mbps Ethernet RJ45 oo loo beddelayo SFP Media Converter ayaa 100BASE-FX fiber u beddeleysa warbaahinta 100Base-TX copper copper ama taa beddelkeeda. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Astaamaha • 100Mbps Ethernet RJ45 ilaa SFP Beddelaha Warbaahinta • Nus ama ...
100Mbps Hal Fiber Media Converter ZJ-3100AB
10 / 100M Fiber Media Converter wuxuu u beddelaa 100BASE-FX fiber ilaa 100Base-TX warbaahinta naxaasta ah ama taa beddelkeeda. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Astaamaha • 1 Port 10 / 100M Beddelaha Warbaahinta, Habka Keliya Fibbaarka Half ama ful ...
10 / 100M Fiber Media Converter wuxuu u beddelaa 100BASE-FX fiber ilaa 100Base-TX warbaahinta naxaasta ah ama taa beddelkeeda. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Astaamaha • 1 Port 10 / 100M Beddelaha Warbaahinta, Habka Keliya Faybaarka Labaad • Badh ama buuxa ...
2 Dekedaha Ethernet-ka ee Fiber Media Converter ZJ-100102-25
10 / 100M Fiber Media Converter wuxuu u beddelaa 100BASE-FX fiber ilaa 100Base-TX warbaahinta naxaasta ah ama taa beddelkeeda. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Faahfaahinta • 10 / 100M 2 Ethernet Port in Fiber Media Converter • Half ama d d buuxa ...
1000Mbps Hal Fiber Media Converter ZJ-GS03A / B
10/100 / 1000M Fiber Media Beddelaha wuxuu u beddelaa 1000BASE-FX fiber ilaa 1000Base-TX media copper ama lid ku ah. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Astaamaha • 10/100 / 1000M Beddelaha Warbaahinta, Habka Keliya Fibbaarka Half o ...
10/100 / 1000M Fiber Media Beddelaha wuxuu u beddelaa 1000BASE-FX fiber ilaa 1000Base-TX media copper ama lid ku ah. Bixi xal fudud oo dhaqaale si kor loogu qaado shabakad naxaas ku dhisan oo loo yaqaan 'fiber optic' si loo kordhiyo gaadhista calaamadda. Fogaanta gudbinta Media Converter illaa 120KM. Naqshad-ku-dheel-dheel dheel, si fudud loo rakibo. Waxaa loo isticmaali karaa inuu kaligiis istaago, ama waxaa lagu rakibay shaashadda qalabka wax lagu beddelo ee 2U 14 oo leh koronto awood leh. Astaamaha • 10/100 / 1000M Beddelaha Warbaahinta, Habka Keliya Faybaarka Labaad • Badh ama ...
2U 16 Afyare Rack Mount Mount Chassis
2U 16 Chassis Chassis wuxuu qaadi karaa isku-darka illaa 16 qaybood oo ah fiidiyoowyo fiidiyoow iyo muuqaallo muuqaal / muuqaal ah. Naqshadda 'AC110 / 220V Switch Mode Power Supply (SMPS)' ayaa loo shaqaaleeyay si looga dhigo module-ka inuu si madax-bannaan u shaqeeyo iyadoo aan la fara-gelinayn hal awood xiritaanka iyo qaybo kale oo ka mid ah guuldarrooyinka miisaanka. Isku halaynta sare iyo xasilloonida qayb kasta ayaa la gaaraa. Astaamaha • 2U 16 Chassis Chassis oo loogu talagalay Beddelaha Warbaahinta • Qaadashada Labada Quwadood ee Korantada, waxay sare u qaadi laheyd kalsoonida ...
2U 14 Afyare Rack Mount Mount Chassis
2U 14 Chassis Slots waxay qaadi kartaa 14 qaybood oo ah 10 / 100M ama 10/100 / 1000M oo kaligood beddelaya warbaahinta. Naqshadda 'AC110 / 220V Switch Mode Power Supply (SMPS)' ayaa loo shaqaaleeyay si looga dhigo module-ka inuu si madax-bannaan u shaqeeyo iyadoo aan la fara-gelinayn hal awood xiritaanka iyo qaybo kale oo ka mid ah guuldarrooyinka miisaanka. Isku halaynta sare iyo xasilloonida qayb kasta ayaa la gaaraa. Astaamaha • 2U 14 Chassis Chassis oo loogu talagalay Beddelaha Warbaahinta • Qaadashada Labada Quwadood ee Korantada, waxay kor u qaadi laheyd kalsoonida hayaanka • Sup ...